GB Studio, chishandiso chekugadzira yako wega mitambo yeGame Boy | Linux Vakapindwa muropa
Indasitiri mitambo yemavhidhiyo yakashanduka nekukurumidza mumakore achangopfuura uye vhidhiyo mutambo wevatambi ikozvino Nakidzwa nezvimwe zvemberi zvemitambo zviitiko izvo zvaive zvakaoma kufungidzira makore mashoma apfuura.
Kuchine zvimwe zvitoro kana makambani avo vanoita basa rekuparadzira nekutengesae retro vhidhiyo mitambo. Kunyangwe vazhinji vachisarudza kurodha pasi kubva kunetiweki. Asi DRega ndikuudze kuti zvinokwanisika kuti iwe ugone kugadzira yako wega mutambo weRetro iwe.
Vhiki rino, Chris Maltby akapa GB Studio, chinhu yemahara yakavhurwa sosi qizvo zvinokutendera iwe kuti dzigadzire retro adventure vhidhiyo mitambo yeiyo Game Boy.
«GB Studio yakatanga nezvakawanda zvakatemwa zvinyorwa uye maturusi akazopedzisira ashandiswa kugadzira Asina musoro GB Game, mutambo wevhiki rese weBored Pixels 3. Iyo pixel art vhidhiyo yemutambo ine dingindira» Game Boy «.
Mushure mekupedza jamu, ndakaona kuti nebasa shoma, ndinogona kutora maturusi mudunhu maanogona kushandiswa nevamwe vanhu, pamwe nevanhu vasina kumbobvira vagadzira Iyi app ndizvo zvinokonzerwa nekuedza uku. Ndinovimba unoona iri intuitive uye inonakidza kushandisa «, akadaro Chris Maltby.
1 Nezve GB Studio
1.1 Chishandiso kunyangwe newbies
2 / Maitiro ekuisa GB Studio paLinux?
Nezve GB Studio
Mumhanzi, mukati meGG Studio, inopihwa neGGT Player iyo yakanyorwa mumutauro weAssembler, inzvimbo yekugadzira mimhanzi yeGG neGBC.
Iyo inoumbwa ne mod2gbt, iyo inoshandura mod mod kune gbt faira (GameBoy Tracker) uye iyo GBT player ichazoshandiswa kuridza rwiyo urwu muGG.
Chishandiso, senge kupa vapepeti vayo zviri nyore kushandisa pane akasiyana mapuratifomu ainotsigira, akadai seWindows, Linux, uye Mac OS.
Zvinoenderana neiyo GB Studio dhizaini timu, iyo software inokutendera iwe kuti ugadzire chaiwo maROM mafaera iwe aunogona ipapo bhuti mune chero yakatsigirwa mutambo emulator.
Kuti ugone kupora zvishoma, mafaera ane kuwedzera kweROM anogona kusangana nemashandisirwo akasiyana. Uku kuwedzera kunonyanya kushandiswa kweNintendo 64 mutambo ROM mafaira.
Aya marudzi emafaira eROM ane dhata yemutambo weNintendo 64 vhidhiyo yemutambo koni, ichibvumira mushandisi kutamba mitambo yeN64 pakombuta panguva imwechete achishandisa emulator.
Chishandiso kunyangwe newbies
Chris Maltby nevamwe vanopa vanonyora akati wandei mabhenefiti eGB Studio. Ivo vanotaura mune yekutanga chinzvimbo kurerukirwa kwekugadziriswa.
Mupfungwa iyi, ivo vanozivisa izvo GB Studio haidi kutsamira kwakaomarara kuti uise sezvo ichingova application imwe nezvose zvaunoda kuti utange.
Pamusoro pekuvakirwa iyo Webhu, software haidi chero ruzivo rwechirongwa, inofadza vakawanda.
GB Studio inouya newebhu emulator inoshanda zvakakwana kunyangwe pamafoni enhare. Iwe unogona kukurumidza kutumira kunze mitambo yako kuti uitambe iwo mubrowser kana kunyange kuitora paItch.io.
Uyezve, GB Studio yakagadzirirwawo avo vasingazive nezvekomputa chirongwa. Sezvo GB Studio inovanza zvakawanda zvekuomarara kwekugadzira mitambo yeGG.
Hunhu hwayo hukuru hunosanganisira:
Iyo inokutendera iwe kuvaka yako graphical interfaces mune chero mupepeti anokwanisa kugadzira maPNG mafaira, senge Photoshop, Tiled, Aseprite, nezvimwe.
Inosanganisira mienzaniso yeprojekti kuti utange nekukurumidza
inokupa iwe kugona kugadzira JRPG-dhizaini 2D mitambo yemitambo kubva pakutanga
inokutendera kuti iwe ugadzire HTML5 mutambo unoverengwa unomhanyawo pane nharembozha uye inogona kuendeswa kune chero dura rewebhu kana kurodha pasi paItch.io
Inotsigira macOS mwenje uye yerima modes.
/ Maitiro ekuisa GB Studio paLinux?
Kana iwe uchifarira kuyedza iyi yakavhurwa sosi Game Boy mutambo wekugadzira chishandiso. Uchakwanisa kuzviita here kurodha pasi mapakeji akavakirwa "deb kana rpm" uye wovaisa mukugovera kwako.
Iyo yekubatanidza yekuvatora ndeiyi.
Kune vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero chimwe chinobva chinogona kumisa chishandiso kubva kuAUR repositories.
Tiri kungovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GB Studio, chishandiso chekugadzira yako wega mitambo yeGame Boy
Jaime Ant akadaro
"Aya marudzi emafaira eROM ane data remutambo weNintendo 64 vhidhiyo yemutambo mutambo, zvichibvumira mushandisi kutamba N64 mitambo pakombuta imwe chete panguva imwe chete achishandisa emulator."
N64 maROM? Ini handinzwisise iyo ndima (uye yapfuura). Tiri kutaura nezve chishandiso chekugadzira GB uye GBC maROM.
Pindura Jaime Hormiga
Condres OS: yazvino distro yeiyo gore komputa chizvarwa